တစ်ပတ်အတွင်း ရုံတင်ဇာတ်ကားများ (၁.၉.၂၀၁၇)
31 Aug 2017 . 4:58 PM
အခရာရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ… မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ ဒီတစ်ပတ် သောကြာနေ့မှာ ရုံလဲမယ့် ကားသစ်တွေ၊ အောင်မြင်မှုသရဖူဆောင်းပြီး ဆက်လက်ရှိနေမယ့် ရုပ်ရုပ်ကားတွေကို ပွဲစဉ်အချိန်ဇယားနဲ့ တကွ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ The Dark Tower နဲ့ 47 Meters Down လို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေ ရုံဝင်လာပြီမို့ ဒီတစ်ပတ်ကိုလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာအပြည့်နဲ့ ဖြတ်သန်းလိုက်ရအောင်ဗျာ။
47 Meters Down – 2D
47 Meters Down ဆိုတာ သက်စွန့်ဆံဖျားစွန့်စားခန်းကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီး Mandy Moore ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းရဲ့  အစပျိုးပုံကတော့ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကို အားလပ်ရက်ခရီးထွက်လာတဲ့ ညီအမနှစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်အောက်မှာ ငါးမန်းတွေကို ဆင်းကြည့်တဲ့ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့အပြီးမှာတော့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ပိတ်ကားပေါ်မှာ ဆက်လက်ရှုစားရမှာပါ။ IMDB Rating ကတော့ 5.8% ရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာ 54% ရရှိထားပါတယ်။ Box Office မှာတော့ လက်ရှိ အဆင့် ၃၆ နေရာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
10:00AM,12:20PM,02:40PM,05:00PM,07:20PM,09:50PM(Fri to Sun)
10:00AM,12:20PM,02:40PM,05:00PM,07:30PM (Mon to Thu)
12:15PM, 04:45PM, 09:45PM (Fri to Sat)
12:15PM, 04:45PM (Sun to Thu)
JCGV City Mall (St.John) ပွဲချိန်
Mega Ace Cineplex (သာကေတ၊ မြရတနာ) ပွဲချိန်
Mega Ace Cineplex (တာမွေ၊ ရွှေဗဟို) ပွဲချိန်
10:00AM, 12:30PM, 3:30PM, 6:30PM
05:00 PM, 07:15 PM (Fri to Sun)
02:30 PM, 06:00 PM (Mon to Thu)
3:30 PM, 6:30PM
Dark Tower ဆိုတာ ရှင်သန် ဖန်တီးဖြစ်တည်မှုတွေရဲ့ အဓိက အလယ်ဗဟို သော့ချက်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကိုပါ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ဆုံမှတ်ကြီးတစ်ခုပါ။ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာကြီး Stephen King ရဲ့ The Dark Tower Series ၀တ္ထုကို အခြေခံပြီး ပြန်လည် ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ဒါရိုက်တာ Nikolaj Arcel က ရိုက်ကူးဖန်တီးထားပါတယ်။ လက်ရှိ IMDB Rating6ရထားပြီး Rotten Tomatoes မှာ 16% ရထားပါတယ်။ Box Office မှာတော့ နံပါတ် ၁၄ နေရာရရှိထားတဲ့ ဒီကားဟာ ဘယ်ရုံတွေမှာ တင်လဲဆိုတာတော့…
နေပြည်တော်၊ ဂမုန်းပွင့် (လှည်းတန်း၊စံရိပ်ငြိမ်) ပွဲချိန်
9:30AM,11:55AM,02:00PM,04:30PM,06:35PM,09:10PM(Fri to Sun)
9:30AM,11:55AM,02:00PM,04:30PM,06:40PM (Mon to Thu)
ဒါရိုက်တာ ကျော်ဇောလင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဆယ်လီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ရဲအောင်၊ မင်းမော်ကွန်း၊ ထွန်းထွန်း၊ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်၊ နန်းခင်ဇေယျာ၊ ခင်ဝင့်ဝါ တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ။် ဒါ့အပြင် ယွန်းရွှေရည်၊ ညီထွဋ်ခေါင်၊ဘေဘီမောင်တို့နဲ့အတူ အနုပညာမျိုးဆက်သစ် ကလေးငယ်တွေဖြစ်တဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့သား မင်းမြတ်၊ ကျော်ရဲအောင်ရဲ့ သမီးလေး မှုံ့နံ့သာကျော်ရဲအောင်တို့လို ကလေးသရုပ်ဆောင်တွေလည်း အများကြီး ပါဝင်အားဖြည့်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ရှေ့ဆောင်၊ သွင်၊ Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်၊စံရိပ်ငြိမ်)၊ မင်္ဂလာ(သိမ်ကြီးဈေး)၊ မင်္ဂလာစံပြ၊ Top Royal ပါရမီ စိန်ဂေဟာ၊ မင်္ဂလာဝဇီရာ ပွဲချိန်
10:00AM,12:30PM,03:00PM,06:00PM,09:00PM(Fri to Sun)
10:00AM,12:30PM,03:00PM,06:00PM (Mon to Thu)
09:45AM,02:15PM,7:00PM (Fri to Thu)
10:00AM,12:30PM,3:30PM,6:30PM,9:30PM (Fri to Sat)
Mega Ace Cineplex (သာကေတ၊မြရတနာ)၊ (တာမွေ၊ရွှေဗဟို) ပွဲချိန်
10:00PM, 12:40PM, 6:40PM, 9:00PM
09:30AM, 12:30PM , 02:30PM (Fri to Sun)
09:30AM, 12:30PM (Mon to Thu)
အနုပညာရှင်များ၏ ရင်သွေးငယ်များကိုစင်တင်ပွဲထုပ်ထားသည့်ဆယ်လီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး။မကြာခင်ရုံတင်ပြသတော့မည်။
Posted by ဆယ်လီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး on Wednesday, 12 July 2017
Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်၊စံရိပ်ငြိမ်) ၊ သမ္မတ၊ မင်္ဂလာစံပြ ပွဲချိန်
09:45 AM, 12:30 PM (Fri to Thu)
?၂၅.၈.၂၀၁၇ (သောကြာနေ့) မှစ၍ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ရုပ်ရှင်ရုံကြီးများတွင်ပြပြီ….??မိန်းမမာယာ သဲကိုးဖျာ?တဲ့?ယောက်ကျားတွေမာယာများပုံကတော့ရွာထဲက မန်ကျီးကိုးပင် အခေါက်တွေပြောင်ရတဲ့အထိပါပဲ??သိုက်ကလာတယ်စကားမပြောဘူး? ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာတော့ ကျားနဲ့မ မာယာချင်းပြိုင်ကြမယ်???
Posted by သိုက်ကလာတယ် စကားမပြောဘူး on Thursday, 13 July 2017
Vivegam – 2D
9:40AM,12:40PM,03:40PM,06:40PM,09:30PM (Fri to Sun)
9:40AM,01:00PM,04:00PM,07:00PM (Mon to Thu)
12:00PM, 05:30PM, 09:00PM (Fri to Sat)
12:00PM, 05:30PM (Sun to Thu)
Mega Ace Cineplex (တာမွေ၊ ရွှေဗဟို) ပွဲချိန်
3:30PM, 6:30PM, 9:30PM (Fri to Sun)
3:30PM, 6:30PM (Mon to Thu)
Jab Harry Met Sejal – 2D
ဒီကားဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Annabelle ရဲ့ ကနဦးအခြေအနေကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားဖြစ်ပြီး The Conjuring Series ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ လေးကားမြောက်ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ US မှာ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ကမှ ရုံတင်ထားတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ သိပ်မကွာပဲနဲ့ ဒီမှာလည်း ကြည့်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ IMDB Rating7ရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာ 68% ရရှိထားတဲ့ ဒီကားဟာ လက်ရှိ Box Office မှာလည်း အံ့သြဖို့ကောင်းစွာ နံပါတ် ၂ နေရာရရှိထားဆဲပါပဲ။ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေဆီက အကောင်းမြင်မှတ်ချက်တွေလည်း ရရှိထားတဲ့အတွက် မနှေးအမြန် သွားကြည့်သင့်ပါပြီ။
နေပြည်တော်၊ Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်၊စံရိပ်ငြိမ်)၊ မင်္ဂလာဒဂုံစင်တာ၂၊ မင်္ဂလာစံပြပွဲချိန်
09:50AM,12:10PM,02:30PM,04:50PM,07:10PM,09:40PM(Fri to Sun)
09:50AM,12:10PM,02:30PM,04:50PM,07:10PM (Mon to Thu)
09:30AM,11:50AM, 2:10PM,4:30PM,6:50PM,9:15PM (Fri to Sat)
09:30AM,11:50AM, 2:10PM,4:30PM,6:50PM (Sun to Thu)
10:00AM, 01:00PM, 4:00PM, 7:00PM, 9:15PM (Fri to Sun)
10:00AM, 01:00PM, 4:00PM, 7:00PM (Mon to Thu)
10:15AM, 12:45PM, 3:45PM, 6:45PM, 9:15PM
အကယ်ဒမီထွန်းထွန်းတစ်ယောက် အစွမ်းကုန် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီကားကြီးကတော့ ရုံတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ စတီးလ် (ဒွေးမေတ္တာ) ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ ခန့်စည်သူ၊ အိချောပိုနဲ့ အခြားသရုပ်ဆောင်တွေ သိုင်းဝိုင်းပါဝင်ထားပြီး အခုဆို ၃ ပတ်မြောက်အဖြစ် ဒီရုံတွေမှာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
10:00AM, 12:30PM, 9:30PM
10:30AM, 1:00PM, 4:00PM, 9:30PM
ဒီလောက်ဆိုရင် အခရာပရိသတ်ကြီးလည်း ဘယ်ရုံမှာ ဘယ်ကားတင်နေပြီဆိုတာ သိလောက်ပြီမို့ မနှေးအမြန်၊ ဘယ်ကားကြည့်မလဲ တွေးကြံပြီး လက်မှတ်တွေ ရွေးချန်ဖြတ်ကြစို့ရဲ့။